मिडिया डबली काउन्ट डाउन टप १० सार्बजनिक, यो साता तहल्का पिट्दै यी गीतहरु [ भिडियोसहित ]::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
मिडिया डबली काउन्ट डाउन टप १० सार्बजनिक, यो साता तहल्का पिट्दै यी गीतहरु [ भिडियोसहित ]
कृष्ण प्रसाद पहाडी प्रकाशित : शनिबार, जेष्ठ १२, २०७५
कृष्ण प्रसाद पहाडी –
काठमाडौ – यो साता पनि बिभिन्न नयाँ गीत संगीत बजारमा भित्रिए । अघिल्लो साताको तुलनमा यो साता संख्यामा भने केही कमी देखियो । ति गीत संगीत केही सार्वजनिक कार्यक्रम सहित बाँहिर ल्याइयो, भने केही युट्युब मार्फत सार्वजनिक भए । यस्ता छन् योसाता बजारमा आएका गीत संगीत ।
मिडिया डबली डटकमले हरेक १ साताभित्र आएका गित संगीतलाई टप १० टेन कुन कुन परे भन्ने सार्बजनिक गर्दै आएको छ । हामीले १० उत्कृस्ट गित छनोट गर्दा गितमा हुने सबै पक्षलाई नियाल्ने गरेका छौ ।
१ ) ‘जानी नजानी लाएको माया’
गायक सुनिल सिं ठकुरीको पछिल्लो गीत ‘जानी नजानी लाएको माया’को म्युजिक भिडियो यो साता सार्बजनिक भएको थियो, उक्त म्युजिक भिडियो मिडिया डबली टप १ मा पर्न सफल भएको छ।
नायिका आंचल शर्मा र मोडल राजु ग्याबक अभिनय रहेको भिडियो दुईको प्रेम छताछुल्ल भएको दखाइएको छ । नितिन चन्दले निर्देशन गरेको भिडियोलाई दिपेन बस्नेतले सम्पादन गरेका हुन् । सुरेश नेपालीले छायांकन गरेका हुन् ।
गायक निशान भट्टराईको पछिल्लो गीत ‘भुन्टी’को म्युजिक भिडियो यो साता सार्वजनिक भएको थियो, उक्त म्युजिक भिडियो मिडिया डबली टप २ मा पर्न सफल भएको छ। मोडल एलिशा राई र निशान भट्टराईको अभिनय देख्न सकिन्छ । टेकेन्द्र शाहले निर्देशन तथा सम्पादन गरेका हुन् । राम कुमार केसीले छायांकन गरेका हुन् ।
३) ‘हिउँ झैँ गोरी’
गायक नारायण धितालको आवाजमा ‘हिउँ झैँ गोरी’को म्युजिक भिडियो यो साता सार्बजनिक भएको थियो, उक्त म्युजिक भिडियो मिडिया डबली टप ३ मा पर्न सफल भएको छ। मोडल सुष्मा अधिकारी, चेतन सापकोटा र नारायण धितालको अभिनय रहेको छ । युबराज वाइबाले निर्देशन गरेको भिडियोलाई निशान घिमिरेले सम्पादन गरेका हुन् । सुदिप बरालले छायांकन गरेका हुन् ।
‘पल्के’ म्युजिक भिडियो यो साता सार्बजनिक भएको थियो, उक्त म्युजिक भिडियो मिडिया डबली टप ४ मा पर्न सफल भएको छ। नायक पल शाह र नायिका आँचल शर्माको फुलीमा पल्केका छन् । गायक कमल किरणको नयाँ गीत ‘पल्केँ’को भिडियोमा पल आँचल एकसाथ देखिएका छन् ।
विकास सुवेदीको भिडियो निर्देशन गरेको गीतमा एक नारायण भण्डारीका शब्द छन् भने आशिष अबिरलको संगीत रहेको छ । भिडियोमा पल र आँचलको साथमा शाइनिङ्ग डान्स क्रुको नृत्य छ भने नृत्य निर्देशन अनुराग ठकुरीको हो ।
५) ‘पाकेको ऐसेलु मिठो’
गायक तथा सर्जक रामजी खाण र चित्रा पुनको अभिनयमा ‘पाकेको ऐसेलु मिठो’को म्युजिक भिडियो यो साता सार्बजनिक भएको थियो, उक्त म्युजिक भिडियो मिडिया डबली टप ५ मा पर्न सफल भएको छ। गीतमा गायक यज्ञ बि.क र गायिका चित्रा पुनको आबाज रहेको छ । सुजन लम्सालको लय, शब्द रहेको छ भने मौसम हिमालीको निर्देशन अनि दुर्गा पौडेलको छायांकन रहेको छ । तिर्सना म्युजिक कम्पनि बाट बजार ब्यबस्थापन भएको उक्त भिडियो प्रकाश धमला ( भान्जा) ले सम्पादन गरेका हुन्।
६) ‘काफल खान आईजाउला’
गायक लोकेश नाथ र गायिका कल्पना बि.सीको ‘काफल खान आईजाउला’को डेउडा म्युजिक भिडियो यो साता सार्बजनिक भएको थियो, उक्त म्युजिक भिडियो मिडिया डबली टप ६ मा पर्न सफल भएको छ। मोडल आरुसी मगर र शिशिर श्रेष्ठको अभिनय रहेको छ ।
लोकेश नाथको लय, शब्द रहेको छ भने निश्चल केसीको निर्देशन अनि मुकेश हुमागाईको छायांकन रहेको छ । जनता डिजिटल & फिल्मस कम्पनि बाट बजार ब्यबस्थापन भएको उक्त भिडियो अमृत चापागाईले सम्पादन गरेका हुन्।
७) ‘ कित डाडै काटेउ मायालु ‘
मोडल तथा सर्जक बिमल अधिकारि र सुस्मिता गिरिको अभिनयमा ‘कित डाडै काटेउ मायालु’को म्युजिक भिडियो यो साता सार्बजनिक भएको थियो, उक्त म्युजिक भिडियो मिडिया डबली टप ७ मा पर्न सफल भएको छ। गायिका बिष्णु माझि र गायक मोहन खड्काको आवाज रहेको छ । खेम सेन्चुरीको लय रहेको गितमा शब्द बिमल अधिकारिकै रहेको छ। ‘भीडीयोमा मायाँ केहो कस्तो हुन्छ’ भन्ने देखाउन खोजिएको छ ।
कपिल लामाको निर्देशन अनि राजेश घिमिरेको छायांकन रहेको छ। भावना म्युजिक सोलुसन बाट बजार ब्यबस्थापन भएको उक्त भिडियो अमर शाक्यले सम्पादन गरेका हुन्।
८) ‘इन्ट्री मार्यो मायाले’
गायिका अनिता चलाउनेको ‘इन्ट्री मार्यो मायाले’ म्युजिक भिडियो यो साता सार्बजनिक भएको थियो, उक्त म्युजिक भिडियो मिडिया डबली टप ८ मा पर्न सफल भएको छ।गायक रामजी खाण र गायिका अनिता चलाउनेको आवाज रहेको छ । रामजी खाण र रुबिना अधिकारिको दमदार अभिनय देख्न सकिन्छ।
रामजी खाणकै लय रहेको गितमा शब्द घनश्याम रिजालको रहेको छ। मौसम हिमालीको निर्देशन अनि दुर्गा पौडेलको छायांकन रहेको छ। नबिन घर्ति मगरको सम्पादन गरेका छन् ।
९) ‘दारा झार्नु पर्छ’
गायक तथा सर्जक खेम सेन्चुरीको लयमा ‘दारा झार्नु पर्छ’ म्युजिक भिडियो यो साता सार्बजनिक भएको थियो, उक्त म्युजिक भिडियो मिडिया डबली टप ९ मा पर्न सफल भएको छ। गीतमा अविरल बि.सी. र सम्झना भण्डारीको आबाज रहेको छ ।
अविरल बि.सी.कै शब्द रहेको छ भने सरिश्मा राम्जाली र दामोदर सापकोटाको अभिनय देख्न सकिन्छ । बिबेक बि.क को छायांकन तथा निर्देशन गरेका छन् भने रबिन बि.क को सम्पादन रहेको छ ।
१०) ‘परदेशीको मायाँ’
गायक प्रमोद खरेलको आबाजमा ‘परदेशीको मायाँ’ म्युजिक भिडियो यो साता सार्बजनिक भएको थियो, उक्त म्युजिक भिडियो मिडिया डबली टप १० मा पर्न सफल भएको छ। नायक निराजन प्रधान र मोडल सिर्जना पौडेलको अभिनय रहेको छ । गीतमा संगीतकार श्री कृष्ण बम मल्लको संगीत रहेको छ भने शोम नाथ खरेको शब्द रहेको छ ।
राज काफ्लेले निर्देशन गरेको भिडियोलाई मिलन बि.क.ले सम्पादन गरेका हुन् । कामना डिजिटल म्युजिक कम्पनि बाट बजार ब्यबस्थापन भएको उक्त भिडियो ज्ञानेन्द्र शर्माले छायांकन गरेका हुन् ।
भारतमा मतगणना चल्दै गर्दा सनी लियोनी एकाएक ट्रेन्डिङमा, सबै अचम्बित
विवाहअघि नै सेक्स गरेको भर्खरका श्रीमान–श्रीमतीले यौनाङ्ग हेरेर थाहा पाउँछन् कि ?
‘लाज मर्दो बनाई छाड्यौ नेपाली हो भन्न…’ भन्दै आए गायक अमित सापकोटा
संगीतकार सन्तोष केसीको संगीतमा ‘तिम्रो मायाको कसम’ सार्बजनिक
मोडल सापकोटा र रायमाझीको अभिनयमा ‘कृष्ने मेरो नाम’ सार्वजनिक
‘मिसेस नेपाल ग्ल्याम २०१९’का १७ प्रतियोगी प्रशिक्षणको मैदानमा